Tokantrano > DNA test
Sokajy DNA test
LPN2 Polyneuropathy karazany 2 ao amin' ny Leonberger
19 aogôsitra 2020 19 aogôsitra 2020
Fitsapam-pahaizana ADN vaovao: LPN2 ao amin' ny Leonberger dia faly Isika mampahafantatra ity fitsapam-pahaizana vaovao ADN ity izay manokana ho an' ny Leonberger. Io fitsapam-pahaizana ADN io dia hameno ny documentations ny aretina génétiques ao amin' ny Leonberger hamerina miaraka amin' ny LEMP sy ny LPN1 ireo fitsapam-pahaizana ADN. Ny LPN2 dia aretina polyneuropathy. Manodidina ny 5% alika dia entina ary […]
Fitsapam-pahaizana ADN vaovao: LEMP ao amin' ny Leonberger
LEMP Leukoencephalomyelopathy ao amin' ny Leonberger LEMP dia aretina neurodegenerative izay misy fiantraikany eo amin' ny Leonberger hamerina. Izany pathology izany dia noho ny famongorana tsikelikely ny seza myelin izay manodidina ny nerve sela. Ny soritr' aretina hita dia sarotra amin' ny fifindrana, ny fanaovana aretina. Eo amin' ny lampihazo faratampony dia mety tsy afaka ny hitsangana ny alika. Faly isika […]
Fitsapam-pahaizana ADN vaovao: IMM ao amin' ny Soavaly Telo
20 febroary 2020 24 aprily 2020
IMM Immune Mediated Myositis Ny Soavaly Telo Genimal dia nampitombo ilay fitsapam-pahaizana vaovao ho an' ny soavaly Telo hamerina. Ny IMM dia mahatonga ny halehibiazan' ny hozatra haingana. Ny soavaly dia mety ho very 40% momba ny hozatra. Ny soavaly izay misy fiantraikany eo amin' ny homozygous (IMM/IMM) dia mora kokoa ny autoimmune episodes sy ny miverimringina autoimmune incidences amin' ny fampitahana […]
Colortest vaovao: locus ny mamafiny ao amin' ilay alika.
Ny Colortest vaovao iray tao amin' ilay Hamafiny alika, dia locus ity fitsapam-pahaizana ADN Ity dia nanapa-kevitra ny hamafiny ny mena pigments tao amin' ny lokon' ny alika. Ny alika amin' ny genotype izaho/dia manana hamafiny ny mena ao amin' ilay akanzo izay misy eo amin' ny lokon' ny palitao izay antsoina hoe volafotsy, herotra, akanzo fotsy na hazavana fawn. Ny anaran'ny […]
Fitsapam-pahaizana ADN vaovao: Paralysie Laryngée LP ao amin' ny Hoaka Terrier
Fitsapam-pahaizana ADN vaovao: Paralysie Laryngée LP – Hoaka Terrier Ny LP ho an' i Laryngeal paralysis dia respiratory pathology hita any amin' ny alika maro mivarotra. Ireo karazana LP samihafa dia misy araka ny mivarotra sy ny taonan' ilay alika. Ny LP dia ny tsy fahafahana ny lamanitra mpisoron' ny arytenoid cartilages mandritra ny fitaomam-panahy. Izany dia vokatra hita ao amin' ny […]
Fotoana vaovao 3 haingana kokoa ho an' ny génétiques adn.
27 jolay 2019 24 aprily 2020
Ny dingana vaovao 3 haingana kokoa Genimal dia nampitombo ny dingan' ny ADN vaovao fanadihadiana ho an' ny fitsapana génétiques. Ity ip vaovao ity dia tena innovative. Izany dia manolotra vokatra 3 haingana kokoa noho ny fomba fanao amin' ny fomba azo antoka. Ny fitsapam-pahaizana polony ADN ihany no efa hita amin' ity ip vaovao ity toy ny feline PKD, PKDef, PSSM, Degenerative Myeolopathy sns. […]